नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धको उतारचढावमा चीनलाई तान्न खोजिन्छ ः होउ यान्छी, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत – Nepalpostkhabar
Hemant KC । १६ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०६:३० मा प्रकाशित
नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रायः प्रतिक्रिया नजनाउने चीन केही समययता सक्रिय भएको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले नेपालको कूटनीतिक मात्र होइन, राजनीतिक चर्चाको केन्द्रमा छिन्, चीनकी राजदूत होउ यान्छी । भिन्न कूटनीतिक शैलीमा देखिएकी यान्छीको सक्रियतालाई चीनको सक्रियताका रूपमा बुझ्न थालिएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पछिल्लो समय आन्तरिक विवादमा रुमल्लिरहँदा उक्त पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग लगातार भेटघाटमा सक्रिए देखिएकी उनको यो कदमलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल र भारतबीच सीमाविवादमा पनि चीनको भूमिका छ भनेर भारतीय समाजमा विश्लेषण भइरहेको छ । उता चीन र अमेरिकाबीचको राजनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्धले पनि विश्व राजनीति तताएको छ । यी विषयमा मात्र होइन, कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न चीनले हासिल गरेको सफलता पनि चर्चाको विषयमा छ । यी समग्र विषयमा संवाद ?
कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा चीनको अनुभवलाई ‘थ्रिएस’का रूपमा संक्षेपीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलो ‘एस’, सिस्टम ९प्रणाली० रहेको छ । हामीले संस्थागत सुविधाको पूर्ण सदुपयोग गर्‍यौँ । साथै, केन्द्रीकृत एवं किफायती कमान्ड प्रणाली स्थापित गरेका छौँ । राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्व र मार्गनिर्देशनअन्तर्गत सबै तहका सरकारका सबै विभागले अत्यन्त व्यवस्थित रूपमा नियन्त्रण प्रयास गरेका छन् । स्थानीय अधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरू पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रिएका छन् । र, उनीहरूले केन्द्रीय अधिकारीका प्रत्येक निर्णय र योजनालाई कार्यान्वयन गरेका छन् । संक्रमण नियन्त्रणका सबै उपाय कडाइसाथ प्रभावकारी रूपले लागू गरिएको छ । यसरी एउटा प्रभावकारी एवं सुचारु मुलुकव्यापी नियन्त्रण संयन्त्र तैनाथीमा छ ।
तेस्रो ‘एस’ सेक्रिफाइज ९त्याग० हो । मुलुकको भाग्यका लागि सबै नागरिकको जिम्मेवारी हुन्छ । एक अर्ब ४० करोड चिनियाँ जनता, चाहे जुनसुकै लिंग, उमेर र पेसाका हुन्, तिनले एकताबद्ध भएर यो महाव्याधिविरुद्धको लडाइँमा आफूलाई होमेका छन् । चिकित्साकर्मीहरू साहसका साथ आफ्नो कर्तव्यमा उत्रिए । वुहान र हुवेईको अन्य भागका जनताले दृढ संकल्पित भएर नोबल कोरोना भाइरसविरुद्ध लडे र संक्रमण फैलन नदिन बलिदानी पनि दिए । समुदायमा काम गर्न पठाइएका समुदायका कामदार, प्राथमिक एवं सामुदायस्तरका अधिकारी, अन्य अधिकारी, प्रहरी र भन्सार अधिकारीहरू नागरिकको जीवन र सार्वजनिक सुरक्षाको रक्षा गर्न अहोरात्र खटिए । कुरियर, सफाइ कर्मचारी, यातायात कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, स्वयंसेवी एवं समाजका अन्य क्षेत्रका थुप्रै मानिसले आफूलाई यो महाव्याधिविरुद्धको लडाइँमा समर्पित गरेका छन् । उनीहरूको यो एकता र धैर्यले अदम्य शक्ति प्रस्तुत गरेको छ ।
पहिलो, कोभिड–१९ एउटा नयाँ भाइरस हो, अहिलेसम्म यसको कुनै खोप छैन । यो भाइरसमाथि विजय पाउन चीनले एउटा उत्कृष्ट अभ्यास र भरपर्दो अनुभवमा आधारित रहेर सफलताको आफ्नै बाटो तय गरिरहेको छ । चीन एक अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको मुलुक हो । महाव्याधिको उद्गमस्थल वुहानमा मात्रै पनि एक करोड १० लाखभन्दा बढी बासिन्दा छन् । महाव्याधि रोकथाममा कठोर उपाय नअपनाइएको भए परिणाम भयावह हुने थियो । संक्रमणको स्रोत नियन्त्रण गर्न, संक्रमण प्रसारको शृंखला भत्काउन र समुदायमा आधारित सुरक्षा घेराको रखबारी गर्न कठोर उपाय अपनाइएकाले महाव्याधिलाई नियन्त्रणमा लिन सक्यौँ । नतिजा पनि त्यसैले सकारात्मक आएको हो । वास्तवमा विश्वभरका अधिकांश मुलुकले चीनको सफल मोडलको अनुसरण गरेका छन् र लकडाउन र कफ्र्युजस्ता रोकथामका कडा उपाय अवलम्बन गरेका छन् । जसले नतिजा पनि राम्रो दिएको छ । दोस्रो, चिनियाँ जनता सामूहिकताप्रति प्रतिबद्ध छन् । नियन्त्रणका कठोर उपायले हिँड्डुल एवं व्यावसायिक गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रतालाई असर गर्न सक्छ । तर, अधिकांश चिनियाँ जनताले यी उपायप्रति समझदारी देखाएका छन् । र, समाजको समग्र एवं दीर्घकालीन हितका खातिर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं अधिकारलाई केही समयका लागि स्थगित गर्न इच्छुक छन् । यसैबीच, चीनको जमिनीस्तरको सार्वजनिक सेवाको प्रणालीले सापेक्षिक रूपले पूर्णता पाएको छ । सहरी एवं ग्रामीण भेगका अधिकांश नागरिकमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने सामाजिक परम्परा पनि छ । साथसाथै, यहाँ इ–कमर्स सञ्जाल एवं रसदपानी प्रणाली पनि सापेक्षित रूपले विकसित नै छ । यस्तै उपायबाट मात्रै जनताको जिउधनको सुनिश्चितता हुन सक्छ ।
जीवन सर्वोच्च छ, जीवनको सम्मान नै सबभन्दा महत्वपूर्ण मानवअधिकारको रक्षा हो । यो महाव्याधिको सुरुवाती चरणमा हामीलाई नै ठूलो परिमाणमा चिकित्सकीय सामग्रीको आवश्यकता थियो, तथापि हामीले एक सय २० भन्दा बढी मुलुक र थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय संगठनलाई सर्जिकल तथा एन–९५ मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई), न्युक्लिक एसिड टेस्ट किट्स तथा अन्य सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलायौँ । हामीले चीनमा अत्यावश्यक सामग्रीको खरिदमा अधिकांश मुलुकलाई सहजीकरण गरेर सहयोग गरेका छौँ । साथै, हामीले भिडियो कन्फ्रेन्स एवं चिकित्सकीय टोलीलगायतबाट पनि विश्वसँग संक्रमणको रोकथाम एवं नियन्त्रणका अनुभव साझा गरेका छौँ । यसले चीनको कर्तव्य र जिम्मेवारीबोधको भावनालाई पूर्णतः प्रतिबिम्बित गर्छ ।
राष्ट्रपति सी जिनपिङले ७३औँ विश्व स्वास्थ्य सभा ९डब्ल्युएचए० को उद्घाटनका अवसरमा चीनमा कोभिड–१९को खोप विकास भयो भने चीनलाई पु¥याएपछि, चीनले यसलाई सार्वजनिक वस्तु ९पब्लिक गुड्स० बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ । यो विकासशील मुलुकका लागि खोपको पहुँच र सुलभताको सुनिश्चिततामा चीनको योगदान हुनेछ । यसले बाँच्न पाउने अधिकारप्रति सम्मानको अवधारणालाई चीनले निरन्तर अघि बढाउने र विश्वका हरेक मुलुक विशेषगरी विकासशील मुलुकको महाव्याधिविरुद्धको लडाइँमा चीनको योगदान जारी रहने छ भन्ने देखाउँछ । अझै पनि यसमा कुनै मुलुक वा व्यक्तिले राजनीतिक अभीष्ट देख्छन् भने म उनीहरूलाई चिनियाँ खोप प्रयोग नगर्दा हुन्छ भन्ने सुझाब दिन्छु ।
अब हामी नेपाल–चीन सम्बन्धतर्फ फर्कौँ । हालै, नेपालको सत्तारुढ दलको विवाद विभाजनसम्म पुग्ने आकलन भइरहेकै वेला तपाईं र चिनियाँ पक्ष सक्रिय भएको देखिन्छ । काठमाडौंमा तपाईंले सत्तारुढ दलका नेतालाई भेटिरहनुभएको छ । पृष्ठभूमिमा नेपाल–चीनका राष्ट्रपतिबीच र परराष्ट्रमन्त्रीका समकक्षीबीच समेत टेलिफोन संवाद भएको छ । चीनले नेपालमा किन यस्तो सक्रिय भूमिका खेलेको हो रु के यसले भविष्यमा नकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन ?
सन् २०१७ मा बिआरआईको फ्रेमवर्कमा रहेर द्विपक्षीय सहयोगको समझदारीपत्र ९एमओयु०मा नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएदेखि नेपाल आधिकारिक रूपले नै बिआरआईको एउटा महत्वपूर्ण सहभागी बनिसकेको छ । यी दुई मुलुक कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, प्रकोपपछिको पुनर्निर्माण, व्यापार, लगानी र जनस्तरको आदानप्रदानको क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ बनाउन प्रतिबद्ध छन् । यसबाट थुप्रै सकारात्मक उपलब्धि भएका छन् । जहाँसम्म एमसिसीको कुरा छ, त्यो नितान्त नेपाल र अमेरिकाबीचको विषय हो । म बिआरआईलाई एमसिसीसँग तुलना गर्न चाहन्नँ । क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वका लागि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितका आधारअनुरूपको छनोट गर्नेमा हामीलाई विश्वास छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले यो अन्तरवार्ता छापेको छ ।